कसरी दुरुपयोग भइरहेको छ तपाईंको फेसबुक डाटा : यसरी लिनुस् आफ्नो फेसबुक अकाउन्टको स्टेटमेन्ट – Everest Dainik
कसरी दुरुपयोग भइरहेको छ तपाईंको फेसबुक डाटा : यसरी लिनुस् आफ्नो फेसबुक अकाउन्टको स्टेटमेन्ट
२०७४, ११ चैत्र आईतवार
फेसबुकबाट व्यक्तिगत विवरण चोरी भएको भन्ने हल्लाले फेसबुक इंकका सिइओ मार्क जुकरबर्गलाई सेयर बजारमा अर्बौंको घाटा भए पछि फेसबुक प्रयोगकर्ताहरूमा एक किसिमको त्रास व्याप्त रहेको छ।
हालको समस्याको सुरुवात भनेको २०१६ को अमेरिकी चुनावताका ‘क्याम्ब्रिज एनलाइटिका’ नामक ब्रिटिश परामर्शदाता कम्पनी मार्फत पाँच करोड बढी अमेरिकी फेसबुक प्रयोगकर्ताहरूको व्यक्तिगत विवरण चुहाइएको र त्यसलाई चुनाव जित्न प्रयोग गरिएको आरोप लागेपछि देखिएको प्रतिक्रिया नै हो। यसले अमेरिकामा मात्र हैन अन्य देशहरूमा पनि यस प्रति चासो देखिन थालेको छ।
हुन पनि आफ्नो व्यक्तिगत विवरण भनेको आफ्नो सम्पत्ति सरह नै हो। कसले नै चाहन्छ र त्यो सार्वजनिक होस् भनेर !
अब समस्या के हो भने हामीले आफ्नो व्यक्तिगत डाटा कसरी सुरक्षित राख्ने र कसरी त्यसलाई सुरक्षित राख्ने र ककसले त्यसको प्रयोग गर्दैछ भन्ने थाहा पाउने कसरी? यो सम्भव पनि छ र स्वश्यक पनि। हामीले आफ्नो विवरण कसले प्रायो गरिराखेको छ भन्ने कुरा सजिलै पत्ता लागौं सक्छौं। यस्तोमा हामी कसले आफूमाथि निगरानी गरिराखेको छ भनेर समेत थाहा पाउन सक्छौं।
गर्ने के त?
सबैभन्दा पहिले सामान्य रूपमा नै फेसबुक एकाउन्ट लग इन गर्नु पर्छ। त्यसपछि जानु पर्छ सेटिङ्गमा। फेसबुक सेटिङ्ग हुन्छ स्क्रीनको माथिल्लो भागको निलो पट्टिको दायाँ तिर। त्यहाँ रहेको एरो चिन्हमा क्लिक गर्दा सेटिङ्गमा जान सकिन्छ।
अब यसपछिको काम हो सेटिङ्गमा क्लिक गर्ने। यसो गरेको खण्डमा नयाँ पेज खुल्दछ र त्यसको पुछारमा ‘डाउनलोड अ कपि अफ् युअर फेसबुक डाटा’ भन्ने अप्सन दिइएको हुन्छ। यो एक किसिमले आफ्नो बैंक खाताको स्टेटमेन्ट लिए जस्तै हो। यसमा क्लिक गरेको खण्डमा हाम्रो इमेल कन्फर्मेसन मागिन्छ र त्यसपछि जिप फाइलको रूपमा सम्पूर्ण अर्काइभ डाटा हाम्रो कम्पुटरमा डाउनलोड हुन्छ।
यसमा फेसबुकले विभिन्न विज्ञापन कम्पनीहरूलाई प्रदान गरेको हाम्रो सुचना पनि हुन सक्छ, जसलाई हामी ’एडभर्टाइज विथ युअर कन्ट्याक्ट इन्फो’ भन्ने शीर्षक भित्र लिउकाएर राखिएको हुन्छ।
यसमा एउटा एचटिएमएल फाइल हुन्छ जुन ‘विज्ञापन विषय’सँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ। यसमा मुलतः हाम्रो फेसबुक पेजमा प्रयोग गरिने ‘की वर्ड’ राखिएका हुन्छन् ।
साथै यसमा हामीले फेसबुक चलाएदेखि क्लिक या लिक गरेका विज्ञापनहरूको सूचिसम्म भेट्टाउन सकिन्छ।
ट्याग्स: data security, Facebook
साफ च्याम्पियनसिपः फाइनलमा नेपालको भिडन्त भारतसँग